Lesi sihloko sichaza indlela yokuthola i-apostrophe ekhibhodi ezinhlobonhlobo ezahlukene: isiRashiya, isiNgisi noma isi-Ukrainian. Indlela elula ukukwenza lokhu kokubili kokubili: ukhiye ohlukile unikezwa ngalezi zinhloso. Okusho ukuthi, ungangena kuloluphawu ngaphandle kokushintsha isakhiwo sekhibhodi. Kodwa ngesiRashiya, futhi, kunesixazululo esilula futhi esingabizi. Ungasebenzisa ikhodi ye-ASCII ukuyifaka. Zonke lezi zindlela ezizokhethwa kuzo zichazwe ohlakeni lendikimba ehlongozwayo.
Apostrophe kukhibhodi Ngalesi sakhiwo kukhoneni olulodwa nencwadi yaseRussia "e". Akuyona into engavamile kakhulu ngolimi lwesiNgisi, futhi isinqumo esinjalo singaphezu kokufanelekile. Awudingi ukukhumbula inhlanganisela yezimpawu bese uyisebenzisa uma kudingeka. Kwanele kuphela lapho isakhiwo sisebenza (ekhoneni elingezansi elingakwesokudla kwesikrini ibha yomsebenzi kufanele ibe nenhlanganisela ye "En"), vele ucindezele i-"e" yaseRussia, ephakathi komugqa ophakathi nendawo "Faka", bese uvela embonweni ovulekile "'" .
Isimo esifanayo selimi lwesi-Ukraine. Itholakala ngisho nangegama elithi "ikhompyutha" ngokwayo. Kulesi simo, kungokhiye oyedwa ne-Russian letter "e" noma isiNgisi tyndoy (uphawu ~). Lona impendulo lapho i-apostrophe isendaweni yekhibhodi yase-Ukraine. Kodwa ukusetshenziswa kwayo kuhlinzekwa kuphela ngezihumusho zakamuva ze-Windows operating system kusukela ngeVista. Kodwa ezikhathini zangaphambili kwakufanele usebenzise inhlanganisela "Ctrl" futhi ngesikhathi esifanayo udinga ukucindezela i- "e" yesiRashiya kabili. Isebenza ezinguqulweni zakamuva ze-OS, kodwa kulula kakhulu ukusebenzisa ikhi elihlukile.
NgesiRashiya, i-apostrophe iyingqayizivele kakhulu. Lezi zivame ukuvela kwamanye amazwe. Isibonelo, iqhawe eliyingqayizivele lomlobi waseFrance uDumas - D'Artagnan. Kulesi simo, unganikela ngezinketho ezintathu zokuxazulula le nkinga. Esikhathini se-Russian layout ayikho i-apostrophe kukhibhodi. Ngakho-ke, ungashintshela ku-English noma isi-Ukrainian isikhathi esifushane ukuze ufake eyodwa "'", bese ubuyela emuva. Kodwa lokhu akukona ngokuphelele. Kulula ukusebenzisa ikhodi ye-ASCII. Ukuze wenze lokhu, masinyane ubambe "Alt" bese ufaka ikhodi yenombolo. Kulesi simo, lokhu kungu-039. Siyashayela ngo-039 ngokulandelana bese sithola i-apostrophe. Enye indlela izochazwa kancane kancane.
Futhi kuthiwani ngeWORD?
Kulokhu, ungasebenzisa imenyu yomhleli wombhalo. Saya kuthebhu ethi "Faka" bese uthola insimu ethi "Uphawu" kuso. Chofoza ngokukodwa inkinobho yegundane lesokunxele kuso. Ewindini evuliwe, ngokuhambisa (usebenzisa izinkinobho zokuhamba ngemicibisholo) ngesethi yabalingiswa, sithola "'" bese uyifaka ngokucindezela "Faka". Ngemuva kwalokho, vala iwindi bese usuqedile. Lena yindlela yokugcina yokuthayipha i-apostrophe ekhibhodi. Akuyona elula kakhulu, kodwa uma udinga ukungena "'" kanye, ungayisebenzisa.
Ngaphakathi kohlaka lwale ndaba, izindlela ezehlukene zokuthola i-apostrophe ekhibhodi zichazwe. Kuyinto elula kakhulu ukuyenza ngesiNgisi noma e-Ukraine. Kodwa lokhu kungenziwa futhi ngesiRashiya. Kwanele nje ukusebenzisa i-ASCII ikhodi yokufaka. Esimweni ngasinye ngabanye kungcono ukusebenzisa ukhiye obelwe lolu limi noma inhlanganisela yalo. Lokhu kukuvumela ukuthi ukwandise ukusebenza kakhulu. Ngakho-ke, kungcono ukwazi ukhetho ngalunye futhi ulisebenzise njengoba kudingeka.
Futhi wazi kanjani hang lodonga?